tayo sare leh Nylon slider oo loogu talagalay nooca mashiinada dhismaha |
tayo sare leh Nylon slider ee nooca mashiinada dhismaha
Xawaareyaasha Nylon ayaa si ballaaran loo adeegsadaa caagagga injineernimada, oo daboolaya dhammaanba dhinacyada warshadaha. Slider naylon wuxuu leeyahay iska caabin saameyn fiican leh iyo caabbinta daalka, iyo awooda uu u leeyahay inuu iska caabiyo gariirka sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Dhawaaqa la soo saaray ayaa ka hooseeya 2 illaa 4 jeer ka yar kan birta ku dhejiya.
Asal ahaan: Huaian Jiangsu Waxyaabaha: Nylon, PA6 / MC
Magaca badeecada: Nidaamka wax soo saarka slider ee nylon: wax taaj oo kale oo la isku duro / wax loo rido centrifugal / farsamaynta CNC
Midabka: Muunad Midab Caado ah: Qiimaha Iibiyaha
Summad: Cirbadda Haida: Qalitaanka Centrifugal
Faa'iidooyinka iyo isticmaalka slider naylon
Faa'iidooyinka: Nylon slider waa badeecad balaastig ah oo aad u fiican, oo ka sii adkeysi badan slider birta. Maaddadani waxay leedahay nolol dheer iyo iska caabbinta wanaagsan. Iska caabbinta dharka ee nylon ayaa ka wanaagsan tan birta ah. Xannibaadda nayloonku waxay u baahan tahay oo keliya in la mariyo hal jeer inta lagu jiro hawlgalka, loomana baahna saliid labaad, taas oo yaraynaysa isticmaalka isla markaana keydinaysa tamarta Nylon slider wuxuu leeyahay iska caabin saameyn fiican leh, iska caabin daal iyo iska caabin gariir, adkeysi wanaagsan, waa la laaban karaa iyadoo aan laheyn qaab beddelid ah, iyadoo la ilaalinayo adkaanta iyo iska caabinta saameynta soo noqnoqota. Qaylada ka dhalatay waa 2 ilaa 4 jeer kuwa birta ku garaaca. Ku beddelida slider-yada nylon leh birta birta ah kaliya ma badbaadinayso kharashyada dayactirka, laakiin sidoo kale waxay yareysaa cadaadiska wasakheynta deegaanka.
Isticmaal: Xasiloonida kiimikada sare, iska caabinta alkalis, khamriga, ether, hydrocarbons, acids daciif ah, saliidda saliidda, saabuunta, biyaha (biyaha badda), iyo waxay leedahay astaamaha ur, sun lahayn, aan lahayn, iyo miridhku lahayn, sidaas darteed waa si ballaaran loo adeegsaday Isticmaalka qaybaha farsamada ee daxalka ka hortagga alkali, ilaalinta deegaanka iyo fayadhowrka, cuntada, daabacaadda dharka iyo dheehku waxay siisaa xaalado aad u fiican
Eeg miisaanka wax iibsiga
Faahfaahinta baakadaha: Badanaa waxaan isticmaalnaa filimka xumbada iyo sanaadiiqda kartoonada, haddii loo baahdo, baaldiyo alwaax ah ama sanaadiiq alwaax ah ayaa la isticmaali doonaa. Waxyaabaha yaryar waxaa lagu buuxiyaa bacaha is-shaabadaha + kartoonnada. Alaabada waaweyn waxaa lagu buuxiyaa boorsooyin alwaax ah + sanduuqyo alwaax ah
Hore: Barkinta Nylon oo leh adkeysi wanaagsan iyo sifooyin farsamo oo aad u fiican
Xiga: Ku takhasusay soo saarida jilayaasha wiishka leh khibrad hodan ah
Madoobaadka Xirmooyinka Madoow ee Madoow
No.3 Nylon jiinyeer Slider
Slider loogu talagalay nylon jiinyeer
Sifeeyaha uu kujiro jiinyeer